DKMG ah, Puntland, Galmudug, iyo ahlusuna oo Saxiixay Qodobada Shirka Wadatashiga – SBC
DKMG ah, Puntland, Galmudug, iyo ahlusuna oo Saxiixay Qodobada Shirka Wadatashiga
Masuuliyiinta sar sare ee DKMG ah ee Soomaaliya, maamul goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Ahlusuna waljamaaca ayaa maanta saxiixay qodobadii ka soo baxay qeybtii labaad ee shirka wada tashiga Soomaaliya oo la soo gaba gabeeyay .
Qodobada ugu muhiimsan ee lagu heshiiyay ayaa waxaa ka mid ahaa in Baarlamanka Soomaaliya la dhimo kala bar, lagana dhigo 225 laga bilaabo Bisha January ee nagu soo foodleh, iyo in lagu doo xulo afarta sano ee soo socota Baarlamanka nidaamka awood qeybsiga 4.5,.
Qudbado balaaran oo ay halkaasi ka soo kala jeediyeen Madaxda sar sare ee DKMG ah iyo Puntland sida Madaxweynaha Puntland iyo kan DKMG ah ayaa waxa diirada lagu saaray in shirkani uu yahay mid ku soo dhamaaday Guul islamarkaana lagu heshiiyay qodobadii la isla soo qaaday.
Gaba gabadii ayaa waxaa lagu balamay in la isugu imaanayo shirweyne kale oo daba socda shirkan kaas oo lagu ansixin doono Dastuurka.
Sikastaba ha ahaatee Xubnaha kala duwan iyo wafuudii ka qeyb qaadatay qeybra labaad ee shirka wada tashiga ayaa ka dhoofaya magaalada Garoowe,